कोरोनाको जोखिम ब`ढ्यो भन्दै १५ दिन लक-डाउन फेरी थप्ने तयारीमा सरकार !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/कोरोनाको जोखिम ब`ढ्यो भन्दै १५ दिन लक-डाउन फेरी थप्ने तयारीमा सरकार !!!
काठमाडौं, २२ वैशाख । कोरोना भाइरस संक्र`मणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै सरकारले फेरि १५ दिन लकडाउन (ब`न्दा-ब`न्दी) थ`प्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रि`परिषद्को आइतबारको बैठकमा पछिल्लो समय नेपाल कोरोना संंक्र`मित बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संक्र`मण दर बढिर`हेकाले जोखिम कायमै रहेकाले लक-डाउन थप १५ दिन बढाउ-नुपर्ने विषयमा छल`फल भएको थियो।
भारतले लक-डाउनलाई निर`न्तरता दिइरहेका बेला खु`ला सिमाना भएको नेपालमा लकडाउन हटाउँदा स्थि`ति जुनसुकै बेला पनि भया`वह हुनसक्ने भन्दै जेठ १० गते सम्म बढाउने सह-मति भएको स्रोतले बतायो। केही मन्त्रीले कोरोना प्रभावित क्षेत्र वर्गीकरण गरी सोही आधारमा लकडाउन खुकुले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
सं`सर्गबाट कोरोना सङ्क्र`मण
नेपालगञ्जमा फेला परेका न`याँ कोरोना सङ्क्र`मित पहिले फेला परेका व्यक्तिको संस`र्गबाट स`ङ्क्रमित भएको पाइएको छ । नयाँ स`ङ्क्रमित सबै पहिलो पटक सङ्क्र`मण देखिएका नेपालग`ञ्ज–८ डि.एस.पी. रोडका ६० वर्षीयको सम्पर्कमा आएका जोल्हन पूर्वा स्थित मदरसा वरिपरिका बासिन्दा भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पहिलो स`ङ्क्रमित व्यक्तिले जोल्हनपूर्वामा रहेको मदर`सामा बाल-बालिकालाई पढाउने क्रममा सम्पर्क भएको हुन सक्ने अनुमान छ । फेला परेका स`ङ्क्रमित सातदेखि ५८ वर्ष उमेरका छन् । उनीहरु कसैमा पनि कोरोनाको लक्ष`ण नदेखिए पनि कोरोना स`ङ्क्रमण भएको थियो ।
फोकल पर्सन श्रे`ष्ठका अनुसार पहिलो स`ङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका ९० जनाको शनिबार स्वाब सङ्कलन गरिएकामा ३० को नमूना परीक्षण गर्दा १५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । उनीहरु`लाई उपचारका लागि खजुरास्थित आइसो`लेशन अस्प`तालमा पठाइएको छ । नब्बे मध्ये अझै ५४ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले सङ्क्र`मितको स`ङ्ख्या` थप हुन सक्ने बताइएको छ ।
पुनः लकडाउन हुने ! सरकारले गर्यो यस्तो संकेत